Hiob 18 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
18 Ɛnna Bildad a ofi Suha no buae sɛ: 2 “Da bɛn na mode mo nsɛm bɛba awiei?Ɛsɛ sɛ munya ntease, ansa na yɛatoa so akasa. 3 Dɛn nti na ɛsɛ sɛ mubu yɛn sɛ mmoa+Na muhu yɛn mo ani so sɛ yɛn ho ntew? 4 Woyɛ obi a ɔtetew ne kra pasaa, n’abufuw mu.Wo nti wɔbɛpo asase?Anaa ɔbotan betutu afi ne sibea? 5 Ɔbɔnefo de, ne kanea bedum+Na ne gyaframa renhyerɛn. 6 Hann beduru sum, ne ntamadan mu,+Na emu kanea mpo bedum. 7 N’anammɔn mu ahoɔden begow.N’agyinatu mpo beyi no ahwe hɔ.+ 8 N’ankasa nan na ɛde no bɛkɔ asau mu,Na atena mu na obetutu ne nan akɔ.+ 9 Afiri beso ne nantin;+Ɔbɛka aguaa+ mu. 10 Wɔde ahama ahintaw asase mu retwɛn no,Na wɔasum afiri ahintaw ne kwan so. 11 Nea ɔbɛfa biara, ahude ma ɔbɔ piriw,+Na ɛtaa no so, n’anammɔn akyi. 12 Ɔkɔm ama n’ahoɔden asã,Na amanehunu+ ayɛ krado sɛ ɛbɛma watɔ agu ne nan so. 13 Owu abakan bedi ne honam;Ɛbɛwe n’akwaa. 14 Wobeyi n’ahotoso afi ne ntamadan mu,+Na ɛbɛtwe no akɔ ahude hene anim. 15 Biribi a ɛnyɛ ne dea bɛtena ne ntamadan mu;Wɔde sufre+ bɛpete ne tenabea. 16 Ne ntini bewu wɔ fam,+Na ne mmaa nso beguan wɔ soro. 17 Ne nkae mpo, ɛbɛyera afi asase so,+Na wɔremmɔ ne din bio abɔnten so. 18 Wobepia no afi hann mu akɔ sum mu,Na wɔapam no afi asase so. 19 Ɔrennya mma ne asefo wɔ ne nkurɔfo mu,+Na obiara renka wɔ faako a obetu akɔtena. 20 Ne da du a, Atɔefo de ahodwiriw bɛhwɛ,Na ehu bekita Apueifo nso. 21 Eyi na ɛbɛba ɔbɔnefo tenabea so,Na eyi ne nea onnim Onyankopɔn no tebea.”